အားလုံးရောမွှေလိုက်ရင်သံပုရာသီးသနပ်ရပါပြီ။ ပုလင်းဗူးသန့်သန့်နဲထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားရင်ကြာရှည်အထားခံပါတယ်။
ဇီယာမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း၁ဇွန်း ဆား၊ဆနွင်း အားလုံးရောပြီးညက်အောင်ကြိတ်ပါတယ်။
ညက်ပြီးသမသွားရင်အရွယ်တော်အလုံးလေးတွေလုံးပြီးအိုးထဲမှာမကပ်အောင် ဆီလေးနဲနဲ ရေလေးနဲနဲထည့်ပြီးရေခမ်းအောင်မီးအေးအေးနဲ့ထားပါတယ်။ရေခမ်းသွားပြီဆိုမှဆယ်ပြီး ဆီများများထဲမှာကြော်ပါတယ်။ဆိတ်သားလုံးကြော်မွှေးမွှေးလေးရပါပြီ။
Posted by ငွေစန္ဒာ at 5:03 PM
Baby taster February 15, 2011 at 6:45 PM
စားချင်၏ ရှလွတ် :)
ငွေစန္ဒာ February 15, 2011 at 7:50 PM
စန္ဒကူး February 15, 2011 at 8:04 PM
ဆိတ်သားလုံးကြော် မြင်ရ၀ူး...ဟီးးး စတာ
ငွေစန္ဒာ February 15, 2011 at 9:32 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) February 16, 2011 at 12:44 AM
အပါး သံပုရာသီး သနပ် ဆိုပါလား
အမှောင်ကမ္ဘာထဲက ဆိတ်သားလုံးကတော့ ကြည့်ရုံကြည့်သွားတယ် ကောင်းကောင်းမမြင်ရလို့ ဟိဟိ
အီကြာကွေးအကြောင်းမေးထားလို့ စီဘောက်မှာ ပြန်ဖြေထားသေးတယ်နော်
အီကြာကွေးကို တရုတ်လို ယို့ထျောင် ( You Tiao (油条) ) လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ သူများကိုမေးထားတာလေ။ လုပ်နည်းက ဒီမှာ http://jthorge.blogspot.com/2007/11/you-tiao-hong-kong-style.html
ကိုဇော် February 16, 2011 at 3:41 PM
အဲဒီလိုဟာတွေ ငတ်နေတာ ကြာပေါ့။
မြင်ရရင် မချိဘူး ၊ တတောက်တောက်ပဲ သွားရည်တွေ။
*** အွန်လိုင်းပေါ်မှ နှိပ်စက်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ. . .ဟီး ***
Sunny February 16, 2011 at 4:30 PM
သံပုရာသီးသနပ်ကိုကြည့်ပြီး သွားကျိန်းလာတယ်.. ဟိဟိ
ငွေစန္ဒာ February 16, 2011 at 7:40 PM
Yan February 16, 2011 at 10:16 PM
ဆိတ်သားလုံးကြော်ပုံလေးက မမြင်ရပေမယ့် သွားရည်တကယ်ကျစေတယ်.း)
ပြောရင်းက ဗိုက်တကယ်ဆာလာပြီဗျာ. ဟတ်ဟတ်.
ဆောင်း February 17, 2011 at 10:58 PM
ဟင် ဒီပို့ စ်လေး ဖတ်မိတာ နောက်ကျသွားလို့သံပုရာသီးတွေ ၉လုံးလောက် အမှဲ့ လွန်ပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ရတာ နှမျှောလိုက်တာ
ခုတော့သိပြီး စမ်းကြည့်အုန်းမယ် ကျေးဇူးပါနော်
ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး February 18, 2011 at 2:43 AM
သံပုရာသီးသနပ်လုပ်ပုံလေးလေ့လာသွားတယ် အစ်မရေ။ အိမ်က စာရေးဆရာက သရက်သီးသနပ်တော့ သိပ်ကြိုက်တာ။ နေ့တိုင်းနီးပါးစားတယ်။ တစ်ခါမှတော့ ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖူးဘူး။ သူဇာမြိုင်သရက်သီးသနပ်ဗူးတွေပဲ ၀ယ်ထားပေးလိုက်တာပဲ။ တစ်ခါလောက်တော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကျွေးကြည့်ရဦးမယ်။
လင်းလင်း June 4, 2011 at 11:05 PM